Madaxweyne Xasan Shiikh oo xariga ka jaray wadada shaqaalaha oo dib loo dhisay +Sawirro+ Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweyne Xasan Shiikh oo xariga ka jaray wadada shaqaalaha oo dib loo dhisay +Sawirro+ Cod
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xarigga ka jiray Wadada Shaqaalaha ee magaalada Muqdisho oo dib u dhis lagu sameeyey muddo ka badan 26 sanno ka dib.
“Guul badan ayuu gaaray mashruuca dalkaaga dhiso , waddooyin badan iyo dhismayaal xarumo dowladdaha hoose ah ayaa dib loogu dhisay . Wadada Shaqaalaha ee aan maanta fureyno waxaa lagu dhisay canshuurta laga qaaday shacabka. Dhammaan dhismooyinka socda ee waddooyinka waxay qeyb ka yihiin kaabayaasha dhaqaaalaha dalka.
Madaxweynaha ayaa ku boggaadiyey umadda Soomaaliyeed sida ay diyaar ugu yihiin ka qeyb qaadashada qorashayaasha dowladda ay dib ugu dhiseeyso dalka, iyada oo la isku tashanayo si looga maarmo kaalmo shisheeeye.